Maxay yihiin 4-ta calaamadood ee burji ee dumarka aad u soo jiita? - SANTE PLUS MAG - TELES RELAY
Maxay yihiin 4-ta calaamadood ee burji ee dumarka aad u soo jiita? - CAAFIMAAD PLUS MAG
Mararka qaar ma sharixi karno waxa na soo jiidan kara ee ka soo horjeeda jinsiga. Ma naxariistiisa, araggiisa mise, liddi ku ah, dhiniciisa yar ee macho ah oo keenaya rabitaankan sii kordhaya ee naga dhex jira ee ah in aan aragno oo aan ku barbaarinno? Xitaa haddii dhadhanka iyo midabbada aan laga wada hadlin, mowjadaha cirku waxay oggolaadeen inay sheegaan in 3-daan calaamadood ee loo yaqaan 'zodiac' ay ku sifeeyaan ragga ugu soo jiidashada badan dumarka dheddigga ah:
Ninka Gemini waa mid caqli badan oo had iyo jeer raadiya inuu horumariyo xirfado cusub. Xiiso badan oo firfircoon, wuxuu jecel yahay socdaalka khibradaha iyo ku noolaanshaha khibradaha cusub. Qofka u dhashay calaamadahan wuxuu leeyahay tamar buux dhaaf ah oo uu muujiyo maalin kasta. Intaa waxaa sii dheer, wuxuu ka faa'iideysanayaa aqoontiisa ballaaran si uu ula wadaago daqiiqado wanaagsan kuwa isaga jecel. Intaa waxaa dheer, Gemini wuxuu dhiirrigeliyaa kalsooni wuxuuna yaqaanaa sida talo wanaagsan loogu siiyo dadka kale. Shirkadiisa, dumarku guud ahaan waxay dareemaan raaxo aad u badan waxayna la wadaagi karaan sirtooda aadka u xun. Laakiin lid ku ah waxa qofku u maleyn karo, Gemini wuu ka fog yahay inuu noqdo "saaxiibkaa ugu fiican". Wuxuu si dhab ah u yaqaan sida looga takhaluso madmadowga jira. Si dhakhso leh, wuxuu ku guuleystey inuu ka tago kalsoonida ilaa jaceylka isla markaana uu waalliyo saaxiibkiis jacayl isaga ka yimid.
Ninka Leo waa khayaano caan ah. Isagu waa isku kalsoon yahay mana ka waaban inuu ku faano xooggiisa badan ee dumarka hortooda. Dareemo, asalka u dhashay calaamadahan ayaa qatar galinaya oo wuxuu jecel yahay inuu ka dhigo guulihiisa si uu u xoojiyo maskaxdiisa. Aragtidiisa sasabashada iyo dareenkiisa dib-u-iibsiga cidna ugama tageyso cid aan dan ka lahayn. Intaa waxaa sii dheer, ninka Leo waa nin nool oo garanaya sida looga faa'iideysto daqiiqad kasta si looga dhigo mid gaar ah. Kaftankiisa wanaagsan waa la is qaadsiinayaa waana uu ku faanaa. Intaas waxaa sii dheer, si fudud uma muujiyo waxa uu dareemayo laakiin waa mid aad u daran daacad ah markuu sameeyo. Uma adkaysan karo munaafaqnimada iyo beenta oo wuxuu ka saari karaa dadka sunta leh iyada oo aan laga helin wax qoomamo ah.
3. Isu dheellitirnaan
Naxariis iyo daryeel, ninka reer Libra wuxuu raadiyaa wada noolaanshaha koonkiisa. Ku manaystay soojiidasho dabiici ah, wuxuu adeegsadaa oo ku xadgudbaa fidnada taas oo kicinaysa xiisaha dumarka. Qofka u dhashay calaamadaani waa mid deeqsi ah oo had iyo jeer doonaya inuu ka farxiyo dadka kale. Aamin, isagu kama cabsanayo inuu galo xiriir muddo dheer ah haddii uu helo saaxiibkiis naftiisa. In kasta oo uu yahay dabeecad feker leh, ninka Miisaanka ayaa ku kici kara jacaylka. Xaqiiqdii, markuu qalbigiisa siinayo haweeney, wuxuu ku caddeyn doonaa iyada kun iyo hal qaab oo kala duwan inay iyadu indhaheeda ku tahay isla markaana uu diyaar u yahay inuu sameeyo wax kasta oo ka farxinaya iyada.
Ninka Capricorn wuxuu soo bandhigayaa dabeecad deggan oo abaabulan. Hammi, wuxuu ku hamiyaa mustaqbal guuleysta wuxuuna siiyaa naftiisa habab lagu gaaro. Sidaa darteed, dhalashada calaamaddan ayaa ku sii socota shaqadiisa waxaana laga yaabaa inuu lumiyo fikradda ah plaisir. Si kastaba ha noqotee, markuu la joogo saaxiibbadiisa, haweenku isaga keliya ayay arkaan. Muuqaalkiisa oo sifiican loo xardhay, indho sarcaad iyo dabeecad xumo ayaa kicisa xiisaha. Sirqarsoon, ninkani wax yar buu hadlayaa laakiin markuu sheekada bilaabo, wuu garanayaa waxa saxda ah ee la yiraahdo si loo kiciyo dadka kale. Isagu waa nin caqli badan oo leh tayo ay ragga badani ku raaxaystaan: qaangaadhnimada.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.santeplusmag.com/quels-sont-les-4-signes-du-zodiaque-qui-attirent-le-plus-les-femmes/
OL: Juninho waa taageere Paquetà le guerrier - FOOT 01
Cameroon: qiimaha iyo qorshooyinka xogta ee loogu talagalay Blue, Camtel ee cusub ee ka shaqeeya GSM - ganacsiga dijital ah ee Afrika